Guraandhalaa 26, 2020
Faayilii - godaantota Afrikaa mana hidhaa yeroo geeffaman, Israa'el, Bara 2014
Embasii Itiyoophiyaa Daar E Salaam jirutti Diplomaatii mootummaa Itiyoophiyaa ka tahan obbo Teewodroos Girmaa warri harra hidhaatii gadi lakkifamee biyyatti deebi’e wagga 2 – 4 kan hidhamanii turan ta’uu dubbatan
NAAYROOBII. KENIYAA —
Lammilee Itiyoophiyaa Taanzaaniyaatti godaansa seeraan alaarratti qabaman 104 harra biiyyatti deebisuu Daar E Salaam ka jiru Embaasiin Itiyoophiyaa beeksiseera. Teewodroos Girmaa qondaalli Imbaasichaa VOA’f akka himanitti lammileen Itiyoophiyaa kun gargaarsa jaarmayaa godaantotaa IOM, Gamtaa Awurooppaa fi baasii mootummaa Itiyoophiyaan biyyatti deebifamuu dubbatan.
Lammileen Itiyoophiyaa 104 Kan Mana Hidhaa Taanzaaniyaa Turan Biyyatti Deebifaman
Obbo Teewodroos lammileen kun mana hidhaa Taanzaaniyaa kutaa bulchiinsa Iringaa jedhamu keessaa ka hiikaman ta’uu, danuun isaaniis dargaggeeyyyii ta’uu himanii hojii humnaa, sarba mirga namoomaa fi rakkoo hedduuf warra saaxilamaa turedha jedhan.
Obbo Teewodroos Imbasiin Itiyoophiyaa Daar E Salaam jiru warra mana hidhaa Taanzaaniyaatti hafee jiru biyyatti deebisuuf hojjetaa jiraatus, garuu godaantonni seeran alaa ammas dhufanii harka poolisii biyyattiitti kufuun rakkoo ta’eera jedhan. Keessumaa godaantonni Itiyoophiyaa qabaman Naannoo Saboota, Sab – Lammoota fi Ummatoota kibbaa godinaalee Halaabaa fi Kambaataarraa ta’uu dubbatanii waan kana hirrisuuf qaamni hundi mootummaaf tumsuu qaba jedhan.
Lammilee Itiyoophiyaa Taanzaniyaa biyyatti deebifamaa jiran kanaaf Gamtaan Awurooppaa dhaabbii jireenyaa akka tolfataniif tumsa akka godhuufis himameera.
Ka Dhiheenya Dhibame Barreessaa Asoosamaa Oromoo Angafa Tumsuuf Waldaan Barreessitoota Oromoo Dhiheenya Sagantaa Qopheesse
Itiyoophiyaa Keessatti Namoonni Sababaa Dhibee Koronaaf Laaboraatoriin Sakatta’aman Dhukkubicha Irraa Walaba Ta’an
Wiirtuun To’annaa Traafikaa Finfinneetti Ijaaramuu Eegale
Itoophiyaan warra mootummaa gara galchuu, qabeenna METEC saamsisuu fi saba eennummaan miidhaniin jette himatte kessaa 63 dhiifama tolchite